Kodzero yekugadzirisa inowedzera kutsigira uremu | Linux Vakapindwa muropa
Steve Wozniak, Apple Co-Muvambi, yakaratidza kutsigira kodzero yevatengi yekusarudza kuti vagadzirise sei uye sei. Sekureva kwaWozniak, Apple ingadai isina kuvapo dai vatengi vanga vasina kodzero yekugadzirisa Hardware yavo vasingatyi kutsiva.
Vazhinji vagadziri vehardware, iyo Apple inozivikanwa kwazvo vane mitemo inodzivisa sarudzo dzekugadzirisa kwevashandisi, kungaita kuti zvikone kuwana ruzivo rwehunyanzvi kana kudzivirira kutengeswa kwezvipenga zvepamutemo. Nekudaro, izvi zviito zviri mumaonero emasangano ekodzero dzevatengi.
Durante vhidhiyo vhidhiyo naLouis Rossmann, murwiri wekodzero-yekugadzirisa, Wozniak akabvunza kuti yaimbova kambani yake bvumira varidzi kugadzirisa uye kugadzirisa yavo Hardwaree semazuva ekutanga ekambani.
Maererano naSteve, Apple ingadai isina kuvapo dai iye naSteve Jobs vakanyimwa mukana wekubvarura, tinker, kugadzirisa uye kugadzirisa Hardware. Nenzira imwecheteyo akarangarira kuti zvizhinji zvebudiriro yeApple II yaive yekutengesa nezvirongwa zvekugadzira. Kubva panguva iyoyo zvichienda mberi, akazvibvunza kuti:
Saka nei uchivamisa? Sei uchimisa auto kugadzirisa nharaunda?
Ndeipi kodzero yekugadzirisa
Kunyangwe Wozniak, nekuda kwenyaya yayo, ichifarira vashandisi kugona kugadzirisa yavo Hardware, chirongwa ichi chinobatsirawo kune vashandisiwo zvavo.. Kodzero yekugadzirisa zvinoreva kwete kungokwanisa chete kusarudza nyanzvi yatinoendesa midziyo yedu uye kukwanisa kusarudza kuti tinoda kuchichinja riini.
Kubva pane maonero ezvakatipoteredza, zvegore rega rega kuti vatengi vanochengeta mafoni avo mafoni ezvemamiriro ekunze anowanikwa zvakaenzana nekusiya mazana matanhatu nemakumi matanhatu neshanu mota mugaraji.
Kodzero yekugadzirisa kufamba inotsvaga izvozvo hurumende dzakatenderedza pasirese dzinoita kuti vagadziri vezvigadzirwa zvemidziyo vagadzire zvidimbu uye ruzivo rwakakosha kuti ruwanikwe kune vanofarira kukwanisa kuita zvakasununguka kugadzirisa uye kugadzirisa. Parizvino mitemo yemuno inosiyana zvakanyanya.
Kubva kuApple ivo vanopokana (kusvika zvino vabudirira) izvo Vatengi vanogona kukuvadzwa vachiedza kugadzirisa michina yavo, semuenzaniso kuboora mabhatiri e iPhone uye kugadzira "zvinongoitika zvega zvekupisa". Mutevedzeri weMutungamiriri weApple weEnharaunda, Policy uye Zvemagariro, Lisa Jackson, akaenderera mberi, achiti Apple iPhones "dzakanyanya kuomarara" kuti mushandisi wepakati agadzirise.
Inosara kubvunza vapamutemo kana vari kuda kuisa kugadziriswa kwemidziyo yakaoma kune vanhu vanovhota pavanovhota.
Zvisinei, zvinhu zvinoita kunge zviri kuchinja. Kune rimwe divi vese United Kingdom neEuropean Union vakatora mutemo unopesana nekupererwa nenguva izvo zvinoda vagadziri vemidziyo kubvumidza kugadziridzwa kwemakore gumi kubva pazuva raakatenga. Zvinoenderana neizvi, makambani anofanirwa kushandisa dhizaini uye maitiro ekugadzira ayo anotendera vatengi kugadzirisa yavo Hardware pasina kukuvara kana kugadziridzwa mukuita, mukuwedzera mukufambisa kuwanikwa kwekutanga kwezvipenga zvikamu kuburikidza neyakavanzika nzira dzekuparadzira.
MuUnited States kusvika zvino gore rinokana, mune makumi maviri neshanu ematunhu makumi mashanu, mabhiri ari kuRudyi rweKudzorerwa akatariswa. Nekudaro, yeaya, anopfuura makumi mashanu muzana akatorambwa kare. Chete iri muMassachusetts yakariita mutemo.
Maererano ne anoshuma Bloomberg, Makambani makuru eatekiniki akaita seApple neGoogle akatendeukira kunzvimbo yekubvunza inonzi TechNet uyo akatumira tsamba kune veparamende. Chinzvimbo chake chakajekeswa muchitauro chakasainwa naDavid Edmonson, mutevedzeri wemutungamiri wenyika:
Kubvumidza mapato asina kufanozivikanwa kuwana ruzivo rwekuongorora zvakavanzika, software, maturusi, uye zvikamu zvinokanganisa kuchengetedzwa kwemidziyo yevatengi uye kuisa vatengi panjodzi yekubiridzira.
Nekudaro, mafungu anogona kutendeuka uye kwete chete nekuda kwerutsigiro rwaWozniak. Federal Trade Commission yakataura mumushumo kuCongress kuti izvozvi zvigadzirwa zvemagetsi zvinokuvadza makwikwi.AI uye kusimudzira kwehupfumi munzvimbo dzine mari shoma. Achitaura zvakanyanya kumatambudziko ekuwana michina yekuwana nzvimbo yekudzidzira, akati:
Chirwere ichi chawedzera mhedzisiro yekugadziriswa kwezvirango kune vatengi. Pane humbowo hushoma hwekutsigira vagadziri kururamisa kwezvirambidzo zvekugadzirisa
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Kodzero yekugadzirisa inowedzera kutsigira uremu